Fanelesibonge Bengu | April 19, 2021
IMOTO: AUDI Q7 45 TDI
EMHLABENI jikelele ucwaningo luveza ukuthi amaSport Utility Vehicle (SUV) amancane, athengwa ubuthaphuthaphu futhi izinkampani ziqinisa kakhulu kuwo.
Lokho akusho ukuthi abantu abasawafuni lawo amakhulu nokuyisigaba lapho kudlala khona i-Audi Q7. Ukukhombisa ukuthi kwa-Audi abayikhohliwe iQ7, bayenze ngcono ngoba isinesikhashana emakethe.
I-Q7 inkulu futhi ingaphezulu kuncane kuka-5 metre ubude futhi iyagqama emgwaqweni. Ishaya nge-singleframe grille enkulu ngaphambili. Ebesihamba ngayo bayengeze inqwaba yezinto njengamarimu angu-21 inch, amaroof rails amnyama nezibuko namaMatrix LED headlight.
Ubukhulu bayo ububona ngaphakathi ngoba akusikhala kuyafiwa! Ibhuthi lifika ku-2,050 litre uma ulalise izihlalo. Baze bayengeza ngezihlalo ozifaka uma uthanda neziyenza ilayishe abagibeli abayisikhombisa. Bayifake iS line Sports package eyenza ibe nama-sports seat ngaphambili abuye afudumale, ukhakhayi olumnyama nama pedal asansimbi ecwebezelayo. Cishe yonke into ngaphakathi isebenza ngogesi ngoba izihlalo eziyisikhumba uzihlela ngebhathini okuhlanganisa ukugoqa nokunyusa ezangemuva.
Ngaphambili kusebenza umunwe kakhulu ngoba izinto uzilawula kumascreen amabili. Yilapho uhlela khona i-aircon, inkombandlela, ukubona iminininingwane yemoto, ukudlala umsakazo, ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay noma i-Android Auto nokunye.
Uyakwazi nokufaka iMyAudi app kuselula bese ubona imininingwane yemoto nokuyivula, nokuyivala nokunye. Ine-virtual cockpit plus, ihead-up display, panoramic glass sunroof nezipikha zeBose. Injini iyefana kuwo wonke nokuyi-3.0l TDI enamandla angu-183kW netorque engu-600Nm nogearobox oyi-9 speed ozishintshayo. Ayenza isuke ku-100 iye ku-100km/h ngemizuzwana engu-6.9 futhi ijubane elikhulu ngu-225km/h.
Idonsa ngawo wonke amasondo. Amandla awashodi nakancane kodwa ngiyizwe iba nokubambezeleka mbijana uma uthi udlula enye imoto masishane ngoba iqale ithule isashintsha igiya bese iyaphakama. Okumnandi ngale njini ukuthi iyonga injalo nje ethangini layo likadizili elingu-85 litres. Ngo-100km/h ibidla amalitha angu-7.7.
Emgwaqweni iwubukhosi ngenxa ye-adaptive air suspension. Amabhampi uwezwa ngendaba futhi uyayikhetha ukuthi ihambe kanjani bese iyaphakama okanye yehle ikhase phansi. Uma ususemgwaqweni ovulekile uyifaka ku-adaptive cruise control izihambele.
Yize inkulu kodwa ukuyipaka akuwona umzukuzuku ngoba inamakhamera aveza umzimba futhi ijika eduze ngoba namasondo angemuva ayajika.
Le moto ngeyomndeni omkhulu ofuna imoto evulekile noma izikhulu ezifuna ukuhamba ngokukhululeka zifike zingakhathele lapho ziya khona. Kuncane uma kukhona, okungathandeki ngayo.
R1 388 500
Ifika ne-Audi Freeway plan yeminyaka emihlanu noma u-100 000km.